ဘီးစနစ်များမော်ကွန်း - ထို rayhab
Avcılar Metrobus မီး! ခရီးသည်ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရသည်။ မုဆိုးတစ်ဦးမီးအင်ဂျင်အခန်းŞükrübeyထွက်ဖဲ့ metrobus ။ ခရီးသည်မီးမီးသတ်သမား၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကမီးမငြိမ်းခဲ့metrobüseကနေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပြီ။ မီးဘေး, Avcılar Metrobus ရပ်နားတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်, Beylikdüzüအဆိုအရ [ပို ... ]
Denizli 23 အတွက်နယူးဘတ်စ်ကားလိုင်းများအဆိုပါတောင်တက်သြဂုတ်လအတွင်းစတင်
မြို့တော်သစ်ဘတ်စ်ကားလိုင်းများ Denizli မြူနီစီပယ်သြဂုတ်လ623 2019 ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်သောကြာနေ့တွင်ဝန်ဆောင်မှုကစတင်ခဲ့သည်။ 19-ဂဏန်းရေတွက်မှုစနစ်အတွက်အဓိကလမ်းကြောင်းများ, မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားဖော်ပြလာသောအခါပထမအဆင့်2အတွက်စေ့စပ်လိမ့်မည် [ပို ... ]
ကို Safe ယာဉ်မောင်းပေါ်မြို့တော်ချောမွေ့လမ်းများ
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်း, ယာဉ်မောင်းများ၏မြို့တော်ပိုအဆင်ပြေခြင်းနှင့်အသက်ပျော်မွေ့နိုင်မယ့်အဆင်ပြေစီးနင်းကိုယ်စားအလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ လမ်းဆောက်လုပ်ရေး, ACIME ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကို မှစ. , ထိုမြို့တော်မြူနီစီပယ်ဘိုးဘေးများ၏အနိမ့်မြေပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်တက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့အများအပြားသည်ကတ္ဖြစ်လာပါသည် [ပို ... ]